‘कुपोषण र बालबिवाह न्यूनीकरण गर्न प्रयासरत छौं’ - SatyaPatrika
‘कुपोषण र बालबिवाह न्यूनीकरण गर्न प्रयासरत छौं’
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा १६ वटा वडाहरु छन् । जसमध्ये एक विशेष महत्व बोकेको वडाको रुपमा वडा नं. ५ छ । यस वडामा १ हजार ३ सय ६६ घरधुरी रहेका छन् जसमा ६ हजार ८ सय ३० जनसंख्या रहेको छ । यस वडामा कालिका मन्दिर, गणेश मन्दिर र कृष्ण प्रणामी मन्दिर जस्ता धार्मिक तीर्थस्थलहरु समेत रहेका छन् । जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो । संघीयतापछि गठन भएका स्थानीय सरकारले काम गर्न सुरु गरेको ४ वर्ष भयो । यसबीचमा वडा नम्बर ५ का जनप्रतिनिधीले जनताको बीचमा गरेको प्रतिबद्धता कति पूरा गरे त ? यिनै विषयमा हामीले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको वडा नं. ५ का वडाध्यक्ष राजबहादुर गुरुङसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंशः
राजबहादुर गुरुङ, वडा नं. ५ का वडाध्यक्ष, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, सुर्खेत ।
तपाईं निर्वाचित भइ सकेपछि वडामा के–के परिवर्तन गर्नुभयो ?
पहिलेको तुलनामा हामी निर्वाचित भएर आएपछि धेरै परिवर्तन भएको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम भनेको वडा कार्यालय भाडामा बसेर सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । वडा कार्यालयको भवन निर्माण गर्यौ । स्वास्थ्यको भवन थिएन त्यो पनि बनायौं । वडा नं. ५ मा स्कुल ८ सम्म मात्र पढाइ हुने निमावि थियो त्यसलाई माविसम्म बनायांै ।
त्यस्तै बच्चाबच्ची नहुँदा बन्द हुने अवस्थामा रहेको कालिका प्रावि विद्यालयलाई मर्ज गरेर सिटीइभिटीका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौं । यस्तै सडकका कामहरु पनि थुप्रै भएका छन् । मेरो कार्यकालमा ३ मिटरको बाटो चौडाइ गरेर ८ मिटर बाटोको ट्र्याक खोल्ने काम भएका छन् । कालोपत्रेको काम भएको छ । नालाहरु बनिरहेका छन् । प्रत्येक वर्ष उज्यालो कार्यक्रमअन्तर्गत सडकमा बत्ति जडान गर्ने काम गरेका छौं । त्यस्तै स्वास्थ्यमा कुपोषण भएका बालबालिकाको पोषणका विशेष कार्यक्रमहरु राखेका छौं । आमा समूहहरुका लागि जनचेतनाका कार्यक्रम गर्दै आएका छौं । बृद्धबृद्धाका लागि सम्मानका कार्यक्रम र अपांग व्यक्तिहरुका लागि ह्वीइलचेर र चस्मा वितरण गर्ने कार्य पनि जारी राखेका छौं । वडाभित्र रहेका धार्मिक तीर्थस्थलहरुको मर्मत गर्ने काम निरन्तर गरेका छौं ।
चुनावमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुभयो ?
मैले गरेको चुनावको प्रतिबद्धतामा करिब ८५ प्रतिशत पूरा गरिसकेको छुँ । अब यो ५/६ महिनाभित्र बाँकी कामहरु पूरा गर्ने गरी लागेको छुँ ।
तपाईंका वडाको मुख्य समस्याहरु के–के हुन ?
प्रशासनिक भवन थिएन, स्वाथ्य भवन थिएन, विद्यालयको समस्या थियो । कक्षा ८ पास गरेपछि ९/१० पढ्न जनमावि, डाँडा स्कुल जानपर्ने बाध्यता थियो । विद्यार्थीको चापले गर्दा त्यहाँ पनि भर्ना हुन नपाउने मुख्य समस्या थियो । हाल बालबालिकाहरुले यही पढ्न पाउने गरी निमावि विद्यालयलाई मावि बनाएका छौं । त्यस्तै सिटीइभिटी प्राविधिक शिक्षालय पनि आउँदै छ । यि मुख्य समस्याका रुपमा थिए । हाल समस्या समाधान भइसकेको छ ।
वडाभित्रको स्वास्थ्य संस्था र सेवा प्रवाहको अवस्था कस्तो छ ?
स्वास्थ्यको भवन बनिसकेको छ । पहिले कटकुवा स्वास्थ्यचौकी जानुपर्ने बाध्यता थियो । बृद्धबृद्धाहरुलाई समस्या हुन्थ्यो अहिले नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा सहजरुपमा स्वास्थ्य जाँच गर्न पाउनु भएको छ । आफ्नै वडाबाट बच्चाहरुको नियमित खोप तथा कोभिड–१९ को खोपका कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । हाल वडाभित्रको स्वास्थ्य संस्था र सेवा प्रवाहको अवस्था एकदमै राम्रो छ ।
गरिबी र बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि कस्ता योजनाहरु बनाउनु भएको छ ?
विदेशबाट रोजगारी गुमाएर आएका नागरिकलाई कृषिमा प्रोत्सहान गर्न तरकारीको बीउविजन बाड्ने, टनेलहरु बाड्नेकाम गरेका छौं ।
तपाईं निर्वाचित भएपछि वडाभित्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका सुधारहरु के–के हुन् ?
कुपोषण बालबालिकाहरु धेरै थिए । पोषणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र कुपोषण न्यूनीकरण गर्न प्रत्येक साल रकम विनियोजन गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौं ।
साथै घर भेट तथा जनचेतनाका कार्यक्रमहरु गरिरहेका छौं । बालबिवाह न्यूनीकरणका लागि पनि थुप्रै जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्यौं । जसले गर्दा धेरै बालविवाहहरु पनि रोकिएका छन् । हाम्रो वडा जंगल क्षेत्र भएको हुँदा बजारबाट आउने र जंगलमा बसेर लागू औषधको प्रयोग गर्ने गरेको धेरै विषयहरु जिल्ला प्रहरीसँग समन्वय गरेर काम गरेका छौं ।
अहिले यो समस्या पनि कम भएको छ । यि सबै कुराहरुमा पहिलेको तुलनामा राम्रो सुधार भएको छ । यसका साथै अहिलेको कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बाहिरबाट आएका नागरिकलाई होम आइसोलेसनमा बस्ने, यो महामारीबाट आफू, आफ्ना बालबच्चा र परिवारलाई सुरक्षित राख्नको निम्ति साबुनपानीले छिनछिनमा मिचीमिची हात धुने, अति जरुरी नपरि घरबाहिर नजाने, यदी जानैपरे मास्क लगाउने अनि अन्य व्यक्तिसँग कम्तिमा २ मिटरको भौतिक दुरी कायम गर्ने जस्ता स्वास्थ्य सावधानी निरन्तर अपनाउन अपिल पनि गरिरहेका छांै । र अन्त्यमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरिदिन सबै वडाबासीलाई अनुरोध पनि गर्छु ।
पानी सुकेपछि पशुचौपायाको चरनस्थल बनेकाे बराहतालमा भरिन थाल्यो पानी